Author Topic: Su'aal: Lugo Qallooc Qandho iyo Xanuun Leh? (Read 8955 times)
« on: January 10, 2009, 08:25:14 PM »
ASALAMU ALEYKUM WB
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada isku xil saartay habsami u socodka Site-kan oo wax tar weyn u ah dadka soomaaliyeed.
Marka xigta, walaal, Magaceyga waa Yusuf Ali, 3 Bil ka hor waxaa telefon iga soo wacay gabar aan qabo oo degan Magaalada Muqdisho, waxay ii sheegtay in wiil aan dhalay uu xanuunsanayo, Qandho Badan, Habeenkii uu aadaarayo, Tilmaamayana inay xanuunayaan Lafaha (Lugaha) dhowr dhaqtar ayaa loo geeyay waxay u soo qoreen daawooyin ay igu sheegtay xanuun baabi,ye iyo Fitimin.
Wiilkii 1-Bil kadib wuxuu keenay in muuqaalka Lugaha ay is badalaan, Lugaha ay soo godmaan (Jilbaha ay isku yimadaan) Soomaalida waxay yiraahdaan DALBO, dadka marka ay soconayaan jilbaha isku xoqa (Lakiin sawir ay ii soo dirtay ayaan ka naxay wiilkii) xiligan wax xanuun ah ma jiraan lakiin muuqaalkii wiilka lugaha waa is badaleen, waxaan ka baqayaa in cudurkan intaan uu ka sii weynaado.
Bal hadii aad wax fikrad ah ka heysiin, ama aad waydiin kartaan dhaqaatiirta halkan ku jirta ama aad saaxiibta tihiin inaad iga siisaan jawaab ama talooyin aan kula dhaqaaqo wiilkaas.
« Reply #1 on: January 11, 2009, 12:23:37 AM »
Waxaa jiro cudur lagu magacaabo "Gedef" oo ku dhaco ilmaha da'doodu u dhaxeyso 9 bilood illaa 3 sano, inkastoo dhici karto in intaa uu ka bato.
Calaamadaha ugu caansan cudurkaan waxaa ka mid ah: madaxa oo weynaado, maqaarka oo jilco, caloosha oo weynaato, kala goysyada oo bararaan, gacmaha ama lugaha oo qalloocdaan.
In feeraha ay adkaadaan taasoo saabka ka dhigeyso mid hore u soo baxsan.
Qasab maahan in calaamadahaan oo idil laga helo hal qof, laakiin qaar ayaa ka soo muuqan karo.
Cudurkaan maahan mid qatar ku ah nolosha caruurta inkastoo uu keeni karo curyaannimo ama qalqallooc lafaha khaas ahaan kuwa lugaha, gacmaha iyo lafdhabarta oo joogto ah.
Waxaa cudurkaan uu ka dhashaa fitamiinka loo yaqaannoo "D" oo ku yaraado jirka.
Inta xanuunkani uusan keenin qallooca lafaha waxaa ka horreeya barar kalabaxyada ah, xanuun, dikaan iyo qandho.
Waxaa lagu daaweeyaa cudurkaan in xanuunka laga jabiyo caruurta lana siiyo fitaamiinno, laakiin waxaa jira nooc ka mid ah gedefka loona yaqaanno (Vitamin D-resistant Rickets) oo macnaheedu yahay Gedefka fitaamiinka waxba ka tarin, noocaan oo ah mid si dhakhso ah u keeno lagu qallooca oo ladaba dhinacba u qalloo cin karo.
Haddii marka cudurkani ku dhacayo cunugga uu yahay socod barada lugaha way godmaan oo waxay u ekaadaan qaanso camal (Bowlegs)
Laakiin ilmaha ka weyn ama ka yar intaa waxay yeeshaan "Dalbo".
Ma jiro daawo ama qalliin lagu sixi karo qallooca ay keento gedefka haddii cunuggu uu la weynaado.
Halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan "GEDEFKA" http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1139.0.html
Re: Su'aal: Lugo Qallooc Qandho iyo Xanuun Leh?
« Reply #2 on: January 11, 2009, 04:28:19 PM »
Aad ayaana u fahmay dhamaan qoraalkii-dii, Cunuga wuxuu jiraa 3.sano, Netka ayaan ka raadiyay sawir u eg muuqaalka cudurka aan ku arkay cunuga, waana kan.
Muuqaalka Cunuga waa sawirka I (Fig I),
Daawada hadii ay tahay kaliya fitaamiinno D, Ma jiraan cuntooyin laga heli karo Fitamiinadaas D ah..
Warbixinta ku lifaaqan sawirkana waa kan, (English)
« Reply #3 on: January 13, 2009, 10:21:14 PM »
FG: Waxaa kaloo muhiim ah in caruurta ay helaan ileys qorax si fitamiinka jirkooda uga faaideysto.
Views: 15559 August 10, 2015, 11:08:40 AM
Views: 13046 September 16, 2016, 09:11:55 PM
Views: 8760 April 13, 2017, 11:46:51 AM
Views: 24031 March 09, 2011, 10:28:48 PM
Views: 14435 December 23, 2010, 07:28:23 PM